Check-in Sat, Jul 2
Check-out Sun, Jul 3
Home Membership LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား
ပုဒ်မ 1. ရည်ရွယ်ချက်
LOTTE HOTELS & RESORTS (“ဟိုတယ်”) ကပြုလုပ်သည့် LOTTE HOTEL REWARDS (“အဖွဲ့ဝင်”) အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
ပုဒ်မ 2. အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များ
1. “LOTTE HOTEL REWARDS အဖွဲ့ဝင်” (“အဖွဲ့ဝင်”) ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ စာရင်းသွင်းထားပြီး အဖွဲ့ဝင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူ၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို သဘောတူညီထားသည့် ဧည့်သည်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
2. “LOTTE HOTEL REWARDS ကတ်” (“Mobile Membership Card”) ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့ဝင်များက အဖွဲ့ဝင်ဝန်ဆောင်မှုများကို အောင်မြင်စွာအသုံးပြုပြီးသည့်အတွက် ဟိုတယ်ကထုတ်ပေးသော မိုဘိုင်းကတ်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
3. “ဆုရပွိုင့်အမှတ်များ” (“ပွိုင့်အမှတ်များ”) ဆိုသည်မှာ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ဟိုတယ်က သတ်မှတ်ပေးထားသော စုဆောင်းမှုနှုန်းအပေါ် အခြေခံ၍ အဖွဲ့ဝင်များအား ပေးအပ်သည့် ပွိုင့်အမှတ်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို ဟိုတယ်ကသတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ ပြင်ဆင်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
4. “လက်ဆောင်ဘောက်ချာ” ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့ဝင်များအား တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ပေးအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုဘောက်ချာကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ပေးအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုဘောက်ချာများသည် အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အလိုက် ကွဲပြားသည်။
5. “ရမှတ်ဘောင်ချာ” ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့ဝင်များက ၎င်းတို့၏ စုဆောင်း ပွိုင့်အမှတ်များကို ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် သီးသန့်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ထုတ်ယူထားသော ဘောက်ချာကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
6. “သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တည်းခိုမှု” ဆိုသည်မှာ အပိုင်း6တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်၊ ဟိုတယ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဌာနစသည်တို့မှတစ်ဆင့် အဖွဲ့ဝင်က ကြိုတင်စာရင်းသွင်းသည့် တည်းခိုနေထိုင်မှုကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
7. “သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော ပမာဏ” ဆိုသည်မှာ ပွိုင့်အမှတ်စုဆောင်းရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အဖွဲ့ဝင်များက သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တည်းခိုမှုအတွင်း သုံးစွဲခဲ့သည့်ပမာဏကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတွင် အခန်းခ၊ ဟိုတယ် အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်းများနှင့် အခန်းတွင်း မီနီ ဘားတို့အတွက် USD ဖြင့် သုံးစွဲခဲ့သည့် ပမာဏ ပါဝင်ပြီး အခွန်နှင့်ဝန်ဆောင်ခတို့ မပါဝင်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ငွေလဲနှုန်းကို ဟိုတယ်က ဆုံးဖြတ်ပြီး ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ထားပါမည်။ အသေးစိတ်ကို အပိုင်း6နှင့်7တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
8. “LOTTE DUTY FREE” ဆိုသည်မှာ ကိုရီးယားရှိ LOTTE DUTY FREE ဆိုင်များကို ရည်ညွှန်းပြီး အခြားနိုင်ငံများရှိ ဆိုင်များ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းအကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များ မပါဝင်ပါ။
9. “အွန်လိုင်းကူပွန်” ဆိုသည်မှာ ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်းကောင်း၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင်လည်းကောင်း အဖွဲ့ဝင်များကြည့်နိုင်သည့် ဟိုတယ်က ထုတ်ပေးသောကူပွန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်က ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသော အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိရန် အွန်လိုင်းကူပွန်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
10. “တံဆိပ်ခေါင်း” ဆိုသည်မှာ ဟိုတယ်တံဆိပ်ခေါင်း ပရိုမိုးရှင်းများကာလအတွင်း အဖွဲ့ဝင်အကောင့်များသို့ အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးပြီး အွန်လိုင်းတွင် စုဆောင်းယူရသော တံဆိပ်ခေါင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် တံဆိပ်ခေါင်းများကို စုဆောင်း၍ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပုဒ်မ 3. အဖွဲ့ဝင် အကျဉ်းချုပ်
1. ဤအဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်သည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။
2. အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်က ပံ့ပိုးပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဆုရပွိုင့်အမှတ်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် လဲလှယ်ရယူခြင်း၊ လျှော့စျေးအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ လက်ဆောင်ဘောက်ချာများ၊ အွန်လိုင်းကူပွန်များနှင့် တံဆိပ်ခေါင်း စုဆောင်းခြင်းများ ပါဝင်သည်။
3. အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
① SIGNIEL (ဆိုးလ်၊ ဘူဆန်)
② LOTTE Hotels (ဆိုးလ်၊ ကမ္ဘာ၊ ဘူဆန်၊ ဂျယ်ဂျူး၊ အူလ်ဆန်၊ ဟနွိုင်း၊ ဆိုင်ဂွန်၊ ဆီယက်တဲလ်၊ ဂူအမ်၊ မော်စကို၊ စိန့်ပီတာစဘတ်၊ ဗလာဒဗစ်စတော့ခ်၊ ရန်ကုန်)
③ L7 ဟိုတယ်များ (မြောင်းဒုံ၊ ဂန်းနမ်၊ ဟုံးဒယ်)
④ LOTTE City Hotels (ဂင်မ်ပို၊ ဂူရို၊ မာပို၊ မြောင်းဒုံ၊ ဒယ်ဂျွန်း၊ ဂျယ်ဂျူး၊ အူလ်ဆန်၊ ကင်ရှီချို)
သို့သော် LOTTE NEW YORK PALACE၊ LOTTE City Hotel Tashkent Palace၊ LOTTE HOTEL SAMARA နှင့် LOTTE Resorts (ဆုတ်ချို၊ ဘူယော၊ ဂျယ်ဂျူး အတ်ဗီလပ်စ်) သည် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ နယ်ပယ်တွင် မပါဝင်ပါ။
4. ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးအား အဖွဲ့ဝင်များကိုသာ ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များတွင် ဓာတ်ပုံပါသော ID နှင့် ၎င်းတို့၏ Mobile Membership Card ရှိရမည်။
ပုဒ်မ 4. အဖွဲ့ဝင် စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် အကောင့်ဖွင့်ခြင်း
1. အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်နှင့် ဟော်တယ်ကသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
2. အဖွဲ့ဝင်အတွက် စာရင်းသွင်းရန် အဖွဲ့ဝင်များသည် အနည်းဆုံး အသက် 19 နှစ် ရှိရမည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် စာရင်းသွင်း၍ မရပါ။
3. လူတစ်ဦးလျှင် အဖွဲ့ဝင်အကောင့်တစ်ခုသာ ကန့်သတ်ထားသည်။ နှစ်ကြိမ်မှတ်ပုံတင်ထားလျှင် အဖွဲ့ဝင်အကောင့်တစ်ခုမှလွဲ၍ ကျန်အားလုံးကို ရပ်စဲပါမည်။ ရပ်စဲထားသော အဖွဲ့ဝင်အကောင့်ရှိ ပွိုင့်အမှတ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရှိပြီးသားအဖွဲ့ဝင်အကောင့်တွင် ပေါင်းထည့်ပါမည်။
4. မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Mobile Membership Card ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်းကောင်း၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင်လည်းကောင်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဟိုတယ်က သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် စာရင်းသွင်းသည့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏အကောင့်ကို စဖွင့်သုံးပြီးနောက် ကတ်ကို ကြည့်နိုင်သည်။
5. သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အသုံးချမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ သက်တမ်းရှိကာလနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ၏ ပိုဒ်ခွဲ 29 (2) အရ ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ လော့ဂ်အင်မဝင်ထားသော သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နှစ်တာအသုံးပြုထားသော အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သီးခြားသိမ်းဆည်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။
ပုဒ်မ 5. အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှု ဆုံးရှုံးခြင်း
1. အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်တောင်းဆို၍ဖြစ်စေ၊ ဟိုတယ်ကသတ်မှတ်ထားသော အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြစ်စေ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
2. အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီးနောက် အဖွဲ့ဝင်၏လက်ဝယ်ရှိ အကောင့်၊ ပွိုင့်အမှတ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များသည် အလိုအလျောက် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါမည်။
3. မနုတ်ထွက်မီအထိ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခံစားခွင့်ရှိနေပါမည်။ သို့သော် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ဟိုတယ်သည် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု သို့မဟုတ် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှုကို ရပ်စဲနိုင်သည်-
① အဖွဲ့ဝင်က အဖွဲ့ဝင်အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ပွိုင့်အမှတ်များ၊ ဘောက်ချာများ စသည်တို့ကို အခြားတစ်ယောက်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း
② မှားယွင်းသော၊ မမှန်ကန်သော သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော အချက်အလက်များဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
③ အခြားအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အချက်အလက်ခိုးယူခြင်းအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်၏ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း
④ အဖွဲ့ဝင်က ပုံမှန်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း
⑥ အခြားခွင့်မပြုထားသော လုပ်ရပ်များ
4. အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကို ရပ်စဲလိုက်ပြီးနောက် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော အကောင့်၊ ပွိုင့်အမှတ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအထူး အကျိုးခံစားခွင့်များကို အသုံးမပြုနိုင်တော့ပါ။
ပုဒ်မ 6. အဖွဲ့ဝင်အဆင့်များနှင့် အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များ
1. အဖွဲ့ဝင်ကို အဆင့်လေးမျိုး ခွဲခြားထားသည်- Classic၊ Silver၊ Gold နှင့် Platinum တို့ဖြစ်သည်။
2. အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စာရင်းသွင်းပြီးသည့် အဖွဲ့ဝင်များသည့် Classic အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခံစားခွင့်များ ရရှိမည်။
3. လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် သို့မဟုတ် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ရောက်ရှိစေရန်အတွက် ဟိုတယ်ကသတ်မှတ်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်မီရမည်။
4. ဟိုတယ်သည် သက်ဆိုင်ရာအဆင့်အတွက် သုံးခုတွင် အနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီရမည့် အောက်ဖော်ပြပါ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ တစ်နှစ်တာ အဖွဲ့ဝင်ခွင့်အသုံးပြုမှု ကာလတစ်လျှောက်လုံး သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တည်းခိုမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ အဖွဲ့ဝင်၏ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်ပါမည်။
[အဖွဲ့ဝင်အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်း]
ပုဒ်မ 6. အဖွဲ့ဝင်အဆင့်များနှင့် အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များ လမ်းညွှန်ချက်
တည်းခိုနေထိုင်မှု အကြိမ်ရေ အဖွဲ့ဝင်အသစ်အဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်း3ကြိမ်နှင့်အထက် 10 ကြိမ်နှင့်အထက် 20 ကြိမ်နှင့်အထက်
တည်းခိုနေထိုင်သည့် ညအရေအတွက်7ညအထက် 25 ကြိမ်နှင့်အထက် 50 ကြိမ်နှင့်အထက်
သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော ပမာဏ USD 2,000 နှင့်အထက် USD 7,000 နှင့်အထက် USD 15,000 နှင့်အထက်
5. အပိုင်း 6.4 တွင်ဖော်ပြထားသော အဖွဲ့ဝင်အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တည်းခိုနေထိုင်မှု (တည်းခိုနေထိုင်မှု အကြိမ်ရေ၊ တည်းခိုနေထိုင်သည့်ည အရေအတွက်၊ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသည့်ပမာဏ) အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရရန် အခြေအနေအသေးစိတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(1) သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တည်းခိုမှုများအတွက် ထည့်တွက်သည့်ကာလသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၏ ဇန်နဝါရီ 1 ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ 31 ရက်နေ့အထိ ငွေရှင်းထွက်ခွာမှုတစ်ကြိမ်လျှင် အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများအပေါ် အခြေခံမည်ဖြစ်သည်။
(2) သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တည်းခိုနေထိုင်မှုနှင့် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော ပမာဏတွင် အောက်ပါတို့ မပါဝင်ပါ-
① ကာလရှည် တည်းခိုနေထိုင်မှုအတွက် ဈေးနှုန်းများနှင့် အထူးနှုန်းဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ
② အခမဲ့အခန်း သို့မဟုတ် အခန်း ဘောက်ချာများဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ (အဖွဲ့ဝင်က ပံ့ပိုးပေးသော ပက်ကေ့ချ်များ၊ အခမဲ့/အခပေး အခန်းဘောက်ချာများ)
③ ခရီးသွားအေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သော ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ
④ လေကြောင်းလိုင်း သို့မဟုတ် ခရီးသွားအေဂျင်စီ ဝန်ထမ်းအတွက် ဈေးနှုန်းများဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ
⑤ လုပ်ငန်း၊ ဂုဏ်ပြုစားပွဲ သို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ ဈေးနှုန်းများဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ
⑥ အဖွဲ့ဝင်က ဟိုတယ်သို့ တိုက်ရိုက်မပေးချေသော ပမာဏများ
6. အဆင့် စိစစ်သတ်မှတ်ချက်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အဆင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အဆင့်လျှော့ချခြင်းအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲထားပြီး ထိုသို့အမျိုးအစားခွဲမှုမှာ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ၏ ပထမအပတ်တွင် သက်ရောက်သည်။
7. အလားတူနှစ်၏ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်မရောက်မချင်း အဖွဲ့ဝင်အဆင့်များကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
8. ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်များသည် အဖွဲ့ဝင်အဆင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူပါ။ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အလိုက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေအသေးစိတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(1) အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အလိုက် ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးခံစားခွင့်များ
သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသောပမာဏ၏ 3% နှင့် ညီမျှသည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသောပမာဏ၏ 4.5% နှင့် ညီမျှသည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသောပမာဏ၏ 5.25% နှင့် ညီမျှသည် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသောပမာဏ၏ 6% နှင့် ညီမျှသည် - အခြေခံ ငွေကြေးအမျိုးအစားမှာ USD ဖြစ်သည်
- USD 1 = ပွိုင့်အမှတ် 100 မှတ်
တစ်ည နေထိုင်ခွင့် အခန်း ဘောက်ချာ
- - - ဘောက်ချာ 1 ခု - ဟိုတယ်ခွဲအားလုံးအတွက် အစီအစဉ်ရပ်နားသည့်ရက်များ- ဒီဇင်ဘာလ 24 ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ 25 ရက်၊ ဒီဇင်ဘာလ 31ရက်
- 1 x USD 10 ဘောက်ချာ 1 x USD 50 ဘောက်ချာ2x USD 50 ဘောက်ချာ
အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ လျှော့ဈေး
5% 5% 10% 10% - ဟိုတယ်၏ တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်းများတွင်သာ ခံစားခွင့်ရှိသည်
- SIGNIEL (ဆိုးလ်၊ ဘူဆန်) နှင့် LOTTE HOTEL YANGON တို့တွင် CL နှင့် SL (မပါ)၊ 5% GL နှင့် 10% PL ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်
- 10% 15% 20% - ဟိုတယ်၏ တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ လုပ်ငန်းများတွင်သာ ခံစားခွင့်ရှိသည်
- - အိပ်ယာ 10% လျှော့ဈေး
အိပ်ယာခင်း 15% လျှော့ဈေး အိပ်ယာ 20% လျှော့ဈေး
အိပ်ယာခင်း 25% လျှော့ဈေး - ဝယ်ယူရန် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ- hsblue@lotte.net
အတူလာသောဧည့်သည် 1 ဦးအတွက်ကလပ်ခန်းမ ဝင်ကြေးအခမဲ့
- - o o - တည်းခိုရာတွင် အတူပါလာသော ဧည့်သည် တစ်ဦးအတွက် ကလပ်ခန်းမတွင် အခမဲ့နေထိုင်ခွင့် 1 ကြိမ် (ဧည့်သည် တစ်ဦးအမည်ဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပြီး နှစ်ဦး တည်းခိုသည့်အခြေအနေတွင် အတူပါလာသော ဧည့်သည် တစ်ဦးအတွက် အခမဲ့)
- ကလပ်ခန်းမကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန် အသက် 14 နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမည်
- ကလပ်ခန်းမဝန်ဆောင်မှုကို ကလပ်ခန်းမများ သို့မဟုတ် အလုပ်အမှုဆောင်ခန်းခများရှိသော ဟိုတယ်များတွင်သာ သုံးစွဲနိုင်မည်။
- - o o - အခန်းရရှိနိုင်မှုပေါ်မူတည်၍ SIGNIEL နှင့် ကြယ်5ပွင့် ဟိုတယ်များတွင် ရရှိနိုင်သည် (ဧည့်ခန်းပါဟိုတယ်ခန်းများ မပါဝင်ပါ)
- - o o - SIGNIEL နှင့် ကြယ်5ပွင့် ဟိုတယ်များတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်
- - - ညနေ 3:00 နာရီ - LOTTE HOTEL JEJU အတွက် ဇူလိုင်လနှင့် ဩဂုတ်လ မပါဝင်ပါ
- ဟိုတယ်အခြေအနေများကြောင့် ထိုဝန်ဆောင်မှုကို မရရှိနိုင်ပါက ရမှတ် 1,000 ကို လျော်ကြေးအဖြစ် ပေးပါမည်
စံပြု အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များ
ဆုအဖွဲ့ဝင်အတွက် နှုန်းထားများကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်
ကိုရီးယားရှိ LOTTE DUTY FREE ဆိုင်များတွင် 10% မှ 20% အထိ လျှော့ဈေး (အမှတ်တံဆိပ်အချို့နှင့် ပစ္စည်းအချို့အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်)
LOTTE City Hotel Mapo Naru နှင့် LOTTE City Hotel Gimpo Airport C'café ရှိ စားသောက်ဆိုင်များတွင် 10% လျှော့ဈေး (အဖွဲ့ဝင်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်/နံနက်စာ မပါ)
(2) အဖွဲ့ဝင်အဆင့် တစ်ဆင့်လျှင် အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များ အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည့် အခြေအနေအသေးစိတ်
① ပေးအပ်ထားသော အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးကို အဖွဲ့ဝင်၏ တည်းခိုမှုအခန်း (1 ခန်း) တွင် ကန့်သတ်ထားမည်။
② လက်ဆောင်ဘောက်ချာ လဲလှယ်ခြင်းကို အဖွဲ့ဝင်အတွက်သာ ကန့်သတ်ထားမည်။
③ ထုတ်ပေးသည့် လက်ဆောင်ဘောက်ချာတစ်ခုစီအတွက် ပွိုင့်အမှတ် 1 မှတ်ကို အဖွဲ့ဝင်၏အကောင့်မှ အလိုအလျောက်နုတ်ယူပါမည်။
④ လက်ဆောင်ဘောက်ချာများသည် ထုတ်ပေးသည့်နှစ်မှ နောက်နှစ်၏ ဇန်နဝါရီ 31 ရက်အထိ သက်တမ်းရှိပါမည်။ ဘောက်ချာများသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် အလိုအလျောက် အကျုံးမဝင်တော့၍ သက်တမ်းရှိကာလကို ထပ်တိုး၍မရပါ။
⑤ လက်ဆောင်ဘောက်ချာများကို အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများတွင် လက်ခံပါမည်-
■ သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော လုပ်ငန်းများ- တိုက်ရိုက် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ရှိသော အခန်းများ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်းများ (LOTTE DUTY FREE တွင် လက်မခံပါ)
⑥ အသုံးမပြုသော လက်ဆောင်ဘောက်ချာများ သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ဘောက်ချာ လဲလှယ်ပြီး ကျန်ရှိသော လက်ကျန်များကို ပြန်အမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပွိုင့်အမှတ်များဖြင့် ပြန်ယူခြင်း မလုပ်နိုင်ပါ။
⑦ တစ်ည အခန်း ဘောက်ချာကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုဖြင့် လဲလှယ်နိုင်ပြီး အဝင်ကောင်တာတွင် ပြရမည်။ (ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ- သက်ဆိုင်ရာဟိုတယ်ရှိ ကြိုတင်စာရင်းပေးမန်နေဂျာ)
⑧ တည်းခိုနေထိုင်ရာ ဟိုတယ်၏ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အထက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များအား မရရှိနိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အစားထိုးပေးသော အခြေအနေများလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေသည်။
ပုဒ်မ 7. ရရှိသော ပွိုင့်အမှတ်များ
1. အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းမျဉ်းများအရ ပွိုင့်အမှတ်များရရှိနိုင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်များစွာဖြင့် ပွိုင့်အမှတ်များကို သီးခြားမရရှိနိုင်ပါ။
2. အဖွဲ့ဝင်မှ ပြီးမြောက်အောင်နေထိုင်ခြင်းအတွက် ပွိုင့်အမှတ်များကိုသာ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ထို့အတွက် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်ကို တင်ပြကာ တိုက်ရိုက်ပေးချေခြင်းအတွက်သာ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
3. အောက်ပါစံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော တည်းခိုမှုအတွက်သာ ပွိုင့်အမှတ်များကို ပေးအပ်ပါမည်-
● ဆုရမှတ်များ = သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော ပမာဏ X အဆင့်တစ်ခုလျှင် စုဆောင်းသည့်နှုန်း X 100
ဥပမာ USD 100 ရှိသည့် သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော ပမာဏ
ပုဒ်မ 7. ရရှိသော ပွိုင့်အမှတ်များ လမ်းညွှန်ချက်
4. အောက်ပါတို့ကို ပွိုင့်အမှတ်စုဆောင်းခြင်းမှ ချန်လှန်ထားပါမည်-
① အခန်းနှုန်းထားမှလွဲ၍ အခြားအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်ငွေများ
③ အငှားအဆောက်အအုံများမှ ကျသင့်ငွေများ
④ အစည်းအဝေးခန်းနှင့် ဂုဏ်ပြုစားပွဲများ ကျသင့်ငွေများ
⑤ လက်ဆောင်လက်မှတ် ဝယ်ယူမှုများ၊ အခပေးအဖွဲ့ဝင်ကြေးများနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများ
⑥ ခရီးသွားအေဂျင်စီနှင့် အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်း နှုန်းထားများ
⑦ လေကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့် ခရီးသွားအေဂျင်စီ ဝန်ထမ်း နှုန်းထားများ
⑧ လုပ်ငန်း၊ ဂုဏ်ပြုစားပွဲများ၊ အသင်းအဖွဲ့၊ ကာလရှည်တည်းခိုမှုနှင့် အထူးနှုန်းထားများ
⑨ အခမဲ့အခန်း သို့မဟုတ် အခန်း ဘောက်ချာများ (အဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်မှ ပံ့ပိုးပေးသော ပက်ကေ့ချ်များ၊ အခန်း ဘောက်ချာများ)
⑩ အဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမတိုင်မီ အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများ
⑪ တိုက်ရိုက် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများတွင် တိုက်ရိုက်ပေးချေသည့် ပမာဏ
⑫ ဟိုတယ်သို့ အဖွဲ့ဝင်မှ တိုက်ရိုက်ပေးချေခြင်းမဟုတ်သော ပမာဏ
5. အဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ရက်တည်းတွင် အများဆုံး အခန်း3ခန်းအတွက် ပွိုင့်အမှတ်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။ (သို့သော် အဖွဲ့ဝင်၏အခန်းအပြင် အပိုအခန်း2ခန်းအထိ အဖွဲ့ဝင်မှ တိုက်ရိုက်ပေးချေမှသာလျှင် ပွိုင့်အမှတ်များကို ပေးအပ်ပါမည်။)
6. အဖွဲ့ဝင်သည် ၎င်းတို့၏ Mobile Membership Card ကို မပြသဖြင့် ပွိုင့်အမှတ်များ မပေးအပ်ပါက ထွက်ခွာစာရင်းပိတ်မည့်ရက်မှ6လအတွင်း ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ပွိုင့်အမှတ်အကြွေးကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။
7. ပွိုင့်အမှတ်များကို လေကြောင်းခရီးသွားလာမှု မိုင်အရေအတွက်နှင့်အတူ ပေးအပ်၍မရပါ။ (1 ကို ရွေးချယ်ပါ)
ပုဒ်မ 8. ပွိုင့်အမှတ်များ လဲလှယ်ခြင်း
1. ပွိုင့်အမှတ်များကို လဲလှယ်သည့်အခါ၊အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြပြီး ၎င်းတို့၏ Mobile Membership Card ကို ဓာတ်ပုံ ID နှင့်အတူ တင်ပြရမည်။
2. ပွိုင့်အမှတ်များ၏ တန်ဖိုးမှာ အောင်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
● ပွိုင့်အမှတ်တန်ဖိုး- ပွိုင့်အမှတ် 100 မှတ် = USD 1
3. ပွိုင့်အမှတ်များကို အောက်ပါလုပ်ငန်းများတွင် လက်ခံပါမည်-
● သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော လုပ်ငန်းများ- တိုက်ရိုက် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ အခန်းများ၊ အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်းများ
● အနိမ့်ဆုံး လဲလှယ်နိုင်မှု- ပွိုင့်အမှတ် 1,000 မှတ်
● သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော လုပ်ငန်းများ- ကိုရီးယားရှိ LOTTE DUTY FREE ဆိုင်များ (အခြားနိုင်ငံများရှိ ဆိုင်များနှင့် အွန်လိုင်းအကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များ မပါဝင်ပါ/အချို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပစ္စည်းများအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည်)
● အနိမ့်ဆုံး လဲလှယ်နိုင်မှု- ပွိုင့်အမှတ် 10,000 မှတ်
4. လဲလှယ်သည့်အခါ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် အနီးစပ်ဆုံး ပွိုင့်အမှတ်များကို ဦးစွာနုတ်ယူပါမည်။
5. နုတ်ယူထားသော ပွိုင့်အမှတ်များကို ပြန်မရနိုင်ပါ။
ပုဒ်မ 9. ပွိုင့်အမှတ်များ ပြောင်းလဲခြင်း
အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ ပွိုင့်အမှတ်များကို ဘောက်ချာများ သို့မဟုတ် ဟိုတယ်နှင့် ဆက်နွယ်သော ပြင်ပစီးပွားဖက်များ၏ ပွိုင့်အမှတ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
(1) ပွိုင့်အမှတ်များ ပြောင်းလဲခြင်း → ပွိုင့်အမှတ် ဘောက်ချာများ
① အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ ပွိုင့်အမှတ်များကို ပွိုင့်ဘောက်ချာများအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
② ပွိုင့်ဘောက်ချာများသို့ ပြောင်းလဲသည့်အခါ အဖွဲ့ဝင်များသည် လက်ခံသည့်လုပ်ငန်း၊ ဘောက်ချာယူနစ်နှင့် အသုံးပြုသူအချက်အလက်တို့ကို သတ်မှတ်ရမည်။
③ ပွိုင့်အမှတ်ဘောက်ချာများကို အောက်ပါလုပ်ငန်းများတွင် လက်ခံပါမည်-
④ ပွိုင့်ဘောက်ချာများကို ထုတ်ပေးချိန်တွင် ပွိုင့်အမှတ်များကို ချက်ချင်း နုတ်ယူပါမည်။ ဘောက်ချာထုတ်ပေးသည့် ယူနစ်များ (နုတ်ယူထားသော ပွိုင့်အမှတ်များ) မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
● ထုတ်ပေးသည့် ယူနစ်- USD 10 (1,000 မှတ်)၊ USD 50 (5,000 မှတ်)၊ USD 100 (10,000 မှတ်)
● ထုတ်ပေးသည့် ယူနစ်- USD 100 (10,000 မှတ်)
⑤ ပွိုင့်အမှတ်ဘောက်ချာများသည် ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အထိ သက်တမ်းရှိပါမည်။ ဘောက်ချာများသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် အလိုအလျောက် အကျုံးမဝင်တော့၍ သက်တမ်းရှိကာလကို ထပ်တိုး၍မရပါ။
⑥ ထုတ်ပေးပြီးသည်နှင့် ပွိုင့်အမှတ်ဘောက်ချာများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ငွေသားဖြင့် လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် ရရှိသော ပွိုင့်အမှတ်ဘောက်ချာများကို လဲလှယ်၍ မရပါ။
⑦ ပွိုင့်အမှတ်ဘောက်ချာလဲလှယ်မှုတွင် ကျန်ရှိသည့် လက်ကျန်အားလုံးကို ပြန်အမ်း၍မရပါ သို့မဟုတ် ပြန်မရနိုင်ပါ။
⑧ ပွိုင့်အမှတ်ဘောက်ချာများကို ထုတ်ပေးသည့်အခါ အဖွဲ့ဝင်များသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ကာ လက်ဆောင်ပေးနိုင်သော်လည်း လဲလှယ်ခြင်းကို ဘောက်ချာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အသုံးပြုသူအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။
⑨ ထုတ်ပေးပြီးသည်နှင့် ပွိုင့်အမှတ်ဘောက်ချာများကို ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
(2) ပွိုင့်အမှတ်များ ပြောင်းလဲခြင်း → စီးပွားဖက် ပွိုင့်အမှတ်
① အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ ပွိုင့်အမှတ်များကို ဟိုတယ်နှင့် ဆက်နွယ်သော စီးပွားဖက်များ၏ ပွိုင့်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
② ပွိုင့်အမှတ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ပါတနာအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲထားသော ပွိုင့်အမှတ်များကို လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာပါတနာ၏ အစီအစဉ် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များက ထိန်းချုပ်ပါမည်။
③ ဟိုတယ် သို့မဟုတ် ပါတနာ အခြေအနေများအရ ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာတွင် အပြောင်းအလဲ သို့မဟုတ် အဆုံးသတ်ခြင်း ရှိနိုင်သည်။
④ ပါတနာပွိုင့်အမှတ်များသို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို တောင်းဆိုပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို ပြန်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း မပြုနိုင်ပါ။
⑤ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပါတနာများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ကြည့်နိုင်သည်။
ပုဒ်မ 10. လှူဒါန်းခြင်း
1. အဖွဲ့ဝင်များသည် ပွိုင့်အမှတ်များကို ဟိုတယ်နှင့် ဆက်နွယ်သော ပရဟိတအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းနိုင်သည်။
2. ဟိုတယ်နှင့် ဆက်နွယ်သော ပရဟိတအဖွဲ့သည် UNICEF အတွက် ကိုရီးယား ကော်မတီဖြစ်ပြီး အခြေအနေများအရ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပြီး ထိုအတွက် အသိပေးစာကို ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ပေးပါမည်။
3. အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ပွိုင့်ပမာဏ 1,000 (USD 10)၊ 5,000 (USD 50) နှင့် 10,000 (USD 100)တို့ကို လှူဒါန်းနိုင်သည်။
4. ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ပွိုင့်အမှတ်များလှူဒါန်းခြင်းကို ပယ်ဖျက်၍ မရပါ။
5. နေထိုင်သူမှတ်ပုံတင်နံပါတ်များကဲ့သို့သော မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြသည့် အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကြောင့် ဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူမှုအတွက် လှူဒါန်းထားသည့် ပွိုင့်အမှတ်များအတွက် ပြေစာများကို ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ပုဒ်မ 11. ပွိုင့်အမှတ်များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်
1. စုဆောင်း ရမှတ်များသည် စုဆောင်းရရှိသည့်ရက်မှစ၍ တတိယနှစ်၏ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါမည်။
2. သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသော ပွိုင့်အမှတ်များကို ပြန်အပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် လဲလှယ်ခြင်း မပြုနိုင်ပါ။
3. ဤအဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်ကို ရပ်စဲပါက ရပ်စဲကြောင်း အသိပေးစာထုတ်သည့်နေ့မှ6လကြာလျှင် အဖွဲ့ဝင်၏ ပွိုင့်အမှတ်များက အလိုအလျောက် သက်တမ်းကုန်ပါမည်။
ပုဒ်မ 12. အွန်လိုင်းကူပွန်များနှင့် တံဆိပ်ခေါင်းများ
1. အွန်လိုင်းကူပွန် အင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ- အဖွဲ့ဝင်အဆင့်အလိုက် မတူညီသော ကူပွန်အမျိုးအစားများသည် ဟိုတယ်ခွဲတိုင်းတွင် ခံစားနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်အမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်သည်။ ကူပွန်အကျိုးခံစားခွင့်များသည် ဟိုတယ်မူဝါဒအရ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။ ကူပွန်အသေးစိတ်များကို ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပ်တွင် ကြည့်နိုင်သည်။ ထုတ်ပေးပြီးသည်နှင့် ကူပွန်များကို ထုတ်ပေးသည့်အချိန်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သက်တမ်းရှိကာလအတွင်းသာ ကူပွန်များကို လဲလှယ်နိုင်သည်။
2. တံဆိပ်ခေါင်း အင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များ- အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟိုတယ်တံဆပ်ခေါင်း ပရိုမိုးရှင်းများကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏အကောင့်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းများ ရယူနိုင်သည်။ ပရိုမိုးရှင်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့ကို ကူပွန်အမျိုးမျိုးအတွက် လဲယူနိုင်ပြီး လဲလှယ်နိုင်သည်။ စုဆောင်း တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့် ကူပွန်များကို လွှဲပြောင်း၍ မရပါ။ အသေးစိတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မူဝါဒ၊ အသုံးပြုမှု၊ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် တံဆိပ်ခေါင်းများ၏ သက်တမ်းရှိကာလသည် ဟိုတယ်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမူဝါဒအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
3. အခြားဝန်ဆောင်မှုများ- ဟိုတယ်သည် အဖွဲ့ဝင်များအား ထပ်လောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဖန်တီးပြီး ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါ ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် LOTTE Hotels ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သက်ရောက်စေသည်။
ပုဒ်မ 13. ပြင်ဆင်ခြင်း
1. ဟိုတယ် သို့မဟုတ် ပါတနာ အခြေအနေများအရ ဟိုတယ်သည် အစီအစဉ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ဤအဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်ကိုလည်း ရပ်စဲနိုင်သည်။
2. ဟိုတယ်သည် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အဆိုပါပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါနည်းလမ်းများအနက် အနည်းဆုံးတစ်ခုကို သုံးပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမပြုမီ 14 ရက်ကြိုတင်၍ အဖွဲ့ဝင်များကို အသိပေးပါမည် - ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ တရားဝင်စာ၊ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာသားမက်ဆေ့ချ်။
3. အဆိုပါပြင်ဆင်မှုများရှိခဲ့လျှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပယ်ချနိုင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်မှ နုတ်ထွက်နိုင်သည်။ သို့သော် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် ဟိုတယ်မှ အသိပေးပြီးနောက် ပြင်ဆင်မှု စတင်အကျုံးဝင်သည့်ရက် နောက်ဆုံးထား၍ အဖွဲ့ဝင်များက မကန့်ကွက်ပါက ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ၎င်းတို့ သဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။
4. ဤအဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်ကို ရပ်စဲပါက အဆိုပါအသိပေးစာကို မရပ်စဲမီ အနည်းဆုံး6လကြာ ဟိုတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ထားမည်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များသည် အနည်းဆုံး အီးမေးလ် အသိပေးစာတစ်စောင် ရရှိပါမည်။
5. စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရယူရန် အဖွဲဝင်များ၏ သဘောတူညီမှု မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ပြောင်းလဲမှုမှန်သမျှ သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်းတို့ကို အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအား အသိပေးပါမည်။ ၎င်းကို အတည်ပြုရန် သို့မဟုတ် တိကျသောအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် အဖွဲ့ဝင်၏ ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများအတွက် ဟိုတယ်မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
ပုဒ်မ 14. အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းနှင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေ
1. ဤအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ခြွင်းချက်များအကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော ဥပဒေလုပ်ထုံးကျင့်သုံးမှုများနှင့်အညီ အကျိုးအကြောင်းသင့်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
2. အစီအစဉ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခုက အဖွဲ့ဝင်နေထိုင်ရာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ပါက မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
3. ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို နိုင်ငံတကာကျင့်ထုံး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
4. ဆိုးလ် ဗဟိုခရိုင်တရားရုံးသည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အငြင်းပွားမှုမှန်သမျှအတွက် ကနဦး လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသော တရားရုံးဖြစ်ရမည်။
Dates of change : 23, February 2022 [Previous download version]
Dates of enforcement : 27, May 2022
The terms and conditions of LOTTE HOTEL Rewards membership Program will apply from 27, May 2022